Cover Insurance kuyinto wonke umuntu kufanele ube ngenxa ukuvikeleka zinikeza, kodwa kukhona izinkinga kancane ukuthi izikhathi kuvela izivumelwano inqubomgomo yomshuwalense, esikhatsini lesinyenti at the amaphuzu of kokufaka izicelo isinxephezelo. Some of these common problems are highlighted ...Read More
Kukhona into yomshuwalense - uthatha it up ngoba uqonde umbiko kanye nezinzuzo, noma ungenawo ngoba awazi ukunikeza hoot ngawe nomndeni wakho. If you have ever been involved in some accident and your insurance ...Read More
Umshuwalense muhle futhi yakhelwe ukuvikela kwesamba kusuka nezimo ezingalindelekile, kodwa kwesamba ushayisane nazo adalule ngokwakhe ezingozini zezimali izithunywa yomshuwalense kanye nezinkampani enganakile ekuseni aze wahlupheka bakhohlisi. Many people fall prey to insurance frauds on ...Read More
Abantu abaningi kanye nemindeni ezizimele Bayadiyazela ngaphansi isisindo yomshuwalense various inqubomgomo izinhlelo, futhi lokhu sore ezithinta imali eyiphinda umndeni wabo namazinga okuphila. Bathi bayayivisisa ukubaluleka ukukhokha amaphrimiyamu zabo stoutly futhi empeleni wenze kanjalo, but their the effects ...Read More